Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | République de Madagascar DISTRIKAN’AMBILOBE : MIROBOROBO NY SEHA-PIHARIANA MAITSO – Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Isan’ireo sehatra iasan’ny fandaharan’asa AFAFI NORD ny fiarovana ny tontolo ao amin’ny Distrikan’Ambilobe – Faritra DIANA. Ny fampiroboroboana ny rohi-pihariana maitso no imasohan’ny fandaharan’asa ka isan’izany ny sehatra famokarana mahabibo sy fiompiana tantely izay iarahana amin’ireo vondron’olona ifotony.
Maherin’ny 10 000 ha ny velaran’tany voavoly mahabibo amin’ny kaominina miisa 10 ao anatin’ny Distrikan’Ambilobe ary 1 440 ireo mpamokatra nisitraka fampiofanana amin’ny fomba fambolena ny mahabibo, ny fiotazana ary ny fikarakarana azy. Ankehitriny dia efa maherin’ny 2000 ireo mpioty sy mpamokatra ary fianakaviana mivelona amin’ny Mahabibo ao Ambilobe ary efa manana lalam-barotra izy ireo manjifa ny vokatra.
Manampy ny tantely hamokatra mamin-tantely ny mahabibo ka nisitraka fampiofanana amin’ny fiompiana sy famokarana tantely avy amin’ny mahabibo ihany koa ireo fikambanana. Tanjona ny hamokarana tranon’tantely miisa 3 000 ary miisa 200 ireo efa nisitra fiofanana mahakasika izany.
Tanjon’ny fandaharan’asa izay iarahan’ny MEDD, ny GIZ ary ny HELVETAS manatanteraka ny fanatsarana ny velon-tenan’ireo mponina eny ifotony ireo amin’ny alalan’ny fanomezana asa mampidi-bola maharitra azy mba tsy hiankinan’izy ireo loha amin’ny fitradrahana tsy ara-dalana ny ala.
Nandritra ny firotsahana ifotony tao amin’ny Distrikan’Ambilobe notanterahin’ny Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy VINA Marie-Orléa dia nihaona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny ny koperativa Kinga izay misehatra amin’ny famokarana mahabibo sy tantely ao amin’ny Fokontany Antsoha ny tenany ary nidera ny ezaka izay ataon’izy ireo amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.